Xisbiga Modarterna oo diiday in la dhimo mushaarooyinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anna Kinberg Batra, hoggaamiyaha xisbiga Modaraterna. sawir: SÃ¶ren Andersson/TT
Xisbiga Modarterna oo diiday in la dhimo mushaarooyinka
La daabacay onsdag 16 mars 2016 kl 11.54
Hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna Anna Kinberg Batra ayaa albaabka ka xiratay in haddii uu xisbigeedu la wareego hoggaanka dalka, doorashada dabadeed aanu ogolaan doonin in la xeereeyo mushaarooyinka ugu hooseeya oo hoos loo dhigo.
Waana tallaabo go’aan oo uu xisbigeedu kaga soo hor-jeestay xisbiyada ey xulufada yihiin ee Allians-ka, horayna u soo jeediyay iney taabac-saan yihiin tallaabo noocaasi ah. Iyadoona lagu sababeeeyey sidii ajnaabiibta dalka ku cusub loogu sahli lahaa soo galka suuqa shaqada.
– Dawlad uu xisbiga modarat-ku hoggaaminayo xeereeyn meeyso mushaarooyin hoos loo dhigo, sida ay sheegtay hoggaamiyaha xisbiga Modaraterna, iyadoo hadalkeedii sii wadatana waxay tiri:
– Ma dhici doonto inaannu ku midowno tallaabo noocaasi ah. Hase yeeshee waxaannu ku mideey-sannahey in loo baahan yahay tallaabooyin kale in la qaado ee ajaaniibta dalka ku cusub loogu sahleyo sidii ey suuqa shaqada lugta ula soo geli lahaayeen oo ey ka mid yihiin abuurista shaqooyin sahlan, in qaar badan oo ka mid ahina helaan shaqadoodii ugu horreeysay. Waana sababta uu dalkani ugu baahan yahay dawlad uu hoggaamiyo garabka midig ee Alliansen-ku, sida ay sheegtay Anna Kinberg Batra.
Centern – xisbiga Dhexe ayuu ahaa xisbigii ugu horeeyay ee xisbiyada garabka midig, midkaasina oo bishii feeberaayo ay hoggaamiyaha xisbigaasi Annie Lööf soo ban-dhigtay qorshe la xiriira ajaaniibta dalka ku cusub iyo sidii ey suuqa shaqada luqta ula geli lahaayeen, iyadoona ku dhiiri-gelisay garabyada suuqa shaqadu iney heshiis ku wada gaaraan dhimista mushaarooyinka ee shaqooyinka sahlan. Haddii ay middaasi suurtagal noqon weydana uu xisbiga Center-ku doonayo in la xeereeyo.
Halka ey dabadeed labada xisbi ee Liberalerna iyo Kristdemokraterna albaabbada u fureen fikirka xeereeynta mushaarooyinka ajaaniibta dalka ku cusub.
Hase yeshee ay maanta sheegtay hoggaamiyaha xisbiga Moderna Anna Kinberg Batra in haddii ay noqoto hoggaamiyaha dawladda Sweden ee xisbiyada garabka midig (alliansen) doorashada foodda innagu soo haysa oo ey ka dhiman tahay muddo laba sannadood iyo bar gaarsii-san, aan la hir-gelin doonin mushaar dhimis. Waa sida ay hadalka u dhigtay.
– Aad ayay muhiim u tahay in mowqifka laga taagan yahay su’aashaa la qeexo. Xisbiga moderat-ku wuxuu doonayaa inuu hoggaanka u qabto dawlad xoojineeysa Sweden, fureysa waddooyin badan ee shaqooyin lagu helo. Hase yeeshee aan mushaarooyinka dhimayn.
Dhibaatada ku jirta maxay tahay in la xeereeyo mushaar dhimista?
– In culeeyska la saaro goobo aan looga baahneyn. Caqabadda ugu ballaaran ee Sweden haysata waa kala faqooqnaanta bulshada iyo in aaney dadyoow badani helin shaqadooda ugu horreeysa. Waana dhibaatadaa midda loo baahan yahay in xal loo helo, iyadoona loo mareyo in la abuuro dhabbooyin badan ee suuqa shaqada loo maro sidii lugta loola geli lahaa, sida ay sheegtay Kinberg Batra.
Dhowr maalmood ka hor ayay ahayd kolkii uu madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven ku dhaleeceeyay xisbiyada garabka midig iney duulaan ku yihiin nidaamka Sweden, iyaga oo u soo maraya tusaale ahaan dhimista mushaarooyinka. Halka ay Anna Kinberg Batra uga fal-celisay ammuurtaa:
– Waa dacaayad lagu yaqiinney xisbiga socialdemokraterna. Hase yeeshee in siyaasad un laga hadlo ee aan xalka la eegin waxaan u dayn madaxa dawladda. Midda muhiimadda iigu fadhida waxay tahay inuu dalkan ka jiro faqooq bulshadeed oo sii xoogeeysanaysa mar walba oo ey kor u kacaan tirada dadyoowga ku sugan shaqa-la’aanta. Waxaa loo baahan yahay is-bedello. Waana is-bedello aan diyaar u ahay inaan ku tallaabsado.
Nidaamka Sweden sideed u aragtaa?
– Waxaan qabaa in aannu ku farax-sanaanno, sida ay sheegtay hoggaamiyaha xisbiga modaraterna Anna Kinberg Batra.